[YEPAMUTEMO] dr.fone Toolkit - Android Data chipfudziso: Zvizere vadzime Zvose pamusoro Android uye Dzivirira Privacy Your
dr.fone Toolkit - Android Data chipfudziso
Vadzime Fully Zvose pamusoro Android uye Dzivirira Privacy Your
Simple, baya-kuburikidza muitiro.
Pukuta Android wako zvakakwana uye zvachose.
Vadzime mifananidzo, neshamwari, mashoko, kudanwa matanda uye zvose oga mashoko.
Tinotsigira zvose Android mano zvinowanikwa pamusika.
Edza mahara Buy Now
Simple deletion kana fekitari Reset asingadi kupedza kwazvinoita Android zvachose. The dzadzimwa date achiri inogona akapora pamwe iripo rwokugadzira. Android Data chipfudziso zvinoita kuti yenyu zvakavanzika yakachengeteka nokuda erasing zvachose dzadzimwa mafaira, achibvisa vachivhura kare, akavanzwa saizvozvo uye kudzivirira mashoko ako pachako.
Kutengesa kana kupa kwako Android Phone?
Shandisa Android Data chipfudziso kutsakatisa rako pachako mashoko okutanga.
vadzime Fully zvose pamusoro wako Android pafoni.
Kutengesa kushandiswa Android foni yako kana piritsi? Shandisa dr.fone Toolkit - Android Data chipfudziso kubvisa zvachose zvose Android wako uye kudzivirira kwenyu voga.
Chose pukuta Android runhare yakachena.
Traditional fekitari date Reset asingadi kugeza kwako pachako mashoko pafoni 100%. Android Data chipfudziso kunokubatsira pukuta Android mudziyo yakachena uye aritore kudzokera fekitari pazviruva
Vadzime mhando dzose mashoko pamusoro Android pafoni.
Android Data chipfudziso inoita kuti kudzima voga data, zvakadai mapikicha, mashoko, neshamwari, kufona matanda, anoti, makarenda, uye App data, etc.
Vadzime yekare Android parunhare uye uzvidzivirire.
Uine zvokushandisa, dzadzimwa mashoko ari mutana Android pafoni achiri zvinogona akapora. Uye 1 pa10 anosarudzirwa nokuzivikanwa kuba munyika. Dzivirirai mashoko ako pachako nokuda kuvaparadza wakachena chose.
Tsigira zviuru Android mano wakamhanyira zvakasiyana Android hurongwa.
Kumboda dr.fone Toolkit - Android Data chipfudziso rinotsigira zvose Android mano zvinowanikwa pamusika. Zvichaita kutsigira zvakawanda kamwe zvitsva mano zviripo.
Vadzime All Mhando Personal Data pamusoro Android Your
Unogona kushandisa Android Data chipfudziso kutsakatisa mashoko ose private, kusanganisira mifananidzo, mashoko uye zvakabatanidzwa, neshamwari, kufona nhoroondo, anoti, makarenda, zviyeuchidzo uye App data, nezvimwewo musi Android wako zvachose.
Sei Sarudza dr.fone Toolkit
Simple, nokutsanya, uye inobudirira.
Vakadzima date hazvigoni akapora kubudikidza chero mudziyo.
No Data vakaramba kana leaked panguva kwacho.
Nzwisisa inowanikwa vose kushandisa.
Tsigirai All Android namano
Android Data chipfudziso rinotsigira zvose zvinowanikwa Android mano mumusika. Hazvinei uine Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google Nexus, LG, kana ZTE, etc uye chii Android Shanduro foni yako achimhanya, Android Data chipfudziso kunokubatsira vadzime zvose pafoni zvachose.
sei Android Data chipfudziso basa?
Android Data chipfudziso kunokubatsira anoshandura mashoko ako zvachose unreadable uye ipapo kuchenesa dhisiki yose zvachose. Zvadaro, vanoishandisa vanofanira manually kuita fekitari Reset pafoni afterword. With izvi akavhiyiwa mbiri, mashoko ako havazokwanisi kuti akapora nomumwe munhu zvakare.
Ko Android Data chipfudziso vadzime zvachose mashoko ose parunhare?
Hongu, Android Data chipfudziso zvakakwana uye zvachose kugeza zvose pachavo mashoko ari pafoni, kusanganisira neshamwari, mashoko, mapikicha, kufona matanda, makarenda, Anwendung uye App data, etc.
Ndichatiyi kuteerera kana Ndinoshandisa Android Data chipfudziso?
Ndapota regai patsanura foni kana kuvhura zvimwe Android utariri Software panguva yose muitiro. Uye pakupedzisira, tevedzera mirayiridzo Android Data chipfudziso kuita fekitari Reset pamusoro pafoni yako.
Chii Android mano sei Android Data chipfudziso rutsigiro?
Pari Android Data chipfudziso rinotsigira zvose Android mano zvinowanikwa pamusika. Uye zvichaita nokukurumidza kutsigira zvimwe zvitsva Android mano kamwe ravanosunungurwa.
" Wondershare dr.fone Toolkit Android ane nyore kushandisa inowanikwa kuti anogona kuva navhigesheni kubudikidza vanoshandisa zvose kwevari unyanzvi. Hazvina lightweight uye haashandisi yakawanda ezvinhu zvedu. Yose zvayo, ichi pane inobatsira Kit aigona ibvai shomanana namuka mamiriro ezvinhu kana totaura date apore nokuda Android mudziyo wako. Dzidza zvakawanda >>
- From filehippo, mumwe kumusoro-rakava Software Download nzvimbo kupa pamusoro-rakava Software chete.
dr.fone akachenesa wangu Samsung s5 zvachose pasina sunga. zvino ndinogona akazvitengesa pasina kunetseka ruzivo rwangu.
gooood basa !!!
Android date chipfudziso unonyatsoshanda zvakanaka.
Pakutanga ndakanga chokwadi. Asi dr.fone ndezviya kushanda zvakakwana. Zvakanaka!
Top 7 Android Data chipfudziso Software kuti zvachose pukuta Your Old Android
Top 6 Android Data vadzime Apps Yokudzivirira Privacy Your
How wokugadzirisa dzadzimwa Photos kubva Samsung Galaxy / Note
Kupora Data kubva Samsung Mobile Phones
2 Nzira Kuita Samsung Data Recovery Makazvizarurira Kuziva
How wokugadzirisa dzadzimwa Messages kubva Samsung wako Cell Phone
The Best Way wokugadzirisa dzadzimwa Content kubva Samsung Phones
Kununura Data kubva kuputswa Android dzeserura uye mahwendefa maminitsi 5.